3. Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
“Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe: ngoba ungumqambi manga, noyise wawo. Futhi ngoba nginitshela iqiniso, aningikholwa. … Lowo ongokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu: ngakho aniwezwa, ngoba aniyibo abakaNkulunkulu” (UJohane 8: 44-47).
“Ngalokhu yazini uMoya kaNkulunkulu: Wonke umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama ungokaNkulunkulu: Kanti wonke umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama awuwona okaNkulunkulu: kanti lowo moya owomphikukristu, enizwile ukuthi kufanele eze; futhi namanje usufikile ezweni” (1 Johane 4:2-3).
Noma ubani ongakholelwa kuNkulunkulu esimweni somuntu—okungukuthi, noma ubani ongakholwa umsebenzi namazwi kaNkulunkulu obonakalayo futhi ongakholelwa kuNkulunkulu obonakalayo kodwa kunalokho ekhulekela uNkulunkulu ongabonakali osezulwini—akanaye uNkulunkulu enhliziyweni Yakhe. Bangabantu abangalaleli futhi abaphika uNkulunkulu. Laba bantu bantula ubuntu nomqondo, lingasabalwa iqiniso. Ngoba laba bantu, kuningi abangakukholwa ngoNkulunkulu obonakalayo nongokoqobo, uNkulunkulu ongabonakali futhi okungabonakali sengathi ungokoqobo, ukude kakhulu nezinhliziyo zabo. Abakufunayo akulona iqiniso lento engokoqobo, futhi akuwona amaqiniso okuphila, akuhlobene nezinhloso zikaNkulunkulu; kunalokho balwela ukufica injabulo. Noma iziphi izinto abazifuna kakhulu nabazifisayo, ngaphandle kokuthandabuza, kusuke kuyizinto ezizuzisa bona nezifunwa yibo. Okuwukuphela kwento ebenza bakholelwe kuNkulunkulu ukuthi bafuna ukwanelisa izifiso zabo, hhayi ukufuna iqiniso. Ingabe akubona yini abantu ababi laba? Bazithemba ngokwedlulele, futhi abakholwa ukuthi uNkulunkulu osezulwini angababhubhisa, laba abazibiza “ngabantu abalungile.” Esikhundleni salokho, bakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyobavumela basale, futhi ngaphezu kwalokho, uyobanika umvuzo wokuhle, ngoba bamenzele izinto eziningi uNkulunkulu, futhi babonisa “ubuqotho” obukhulu Kuye. Uma befuna uNkulunkulu obonakalayo, bebeyomelana ngokushesha noNkulunkulu noma bathukutheliswe ukungafezeki kwezifiso zabo. Laba abantu abakhohlakalele ukwanelisa izifiso zabo; ababona abantu abaqotho abafuna iqiniso. Abantu abanjalo babizwa ngokuthi ngabantu ababi abalandela uKristu. Labo bantu abangalifuni iqiniso, abanakulikholelwa iqiniso. Phezu kwalokho abakwazi ngokwengeziwe ukubona ikusasa lesintu, ngoba awukho umsebenzi noma amazwi kaNkulunkulu obonakalayo abawakholwayo, futhi ngeke bakholelwe ekusaseni lomuntu. Ngakho, ngisho noma bemlandela uNkulunkulu weqiniso, basakwenza okubi futhi abalifuni iqiniso, abakwenzi nalokho okufunwa iqiniso.
Inkinga enkulu ngomuntu ukuthi uthanda kuphela izinto angakwazi ukuzibona noma ukuzithinta, izinto eziyinkimbinkimbi kakhulu nezimangalisayo ezingacabangeki kumuntu futhi umuntu ofayo angeke azithole. Ukuqhubeka kwazo lezi zinto zingabi ngokoqobo, yilapho nomuntu eqhubeka khona ezihlaziya, aze ngisho azifune ekushaya indiva konke okunye, bese ezama ukuzizuza. Ukuqhubeka kwazo zingabi ngokoqobo, yilapho nomuntu ezihlolisisa khona futhi azihlaziye, aze adlulele kude ekutheni azenzele eyakhe imibono ngazo. Ngokuphambene nalokho, lapho izinto ziba ngokoqobo, yilapho nomuntu engazinaki khona; umane azibukele phansi aze ngisho azenyanye. Ingabe lokhu akuyona indlela okufanele nibheke ngayo umsebenzi ongokoqobo engiwenzayo namuhla? Lapho izinto ezinjalo ziba ngokoqobo, yilapho nawe uqhubeka ungazithandi. Awuziphi ngisho isikhathi sokuzihlola, kodwa umane uzizibe nje; uzibukela phansi lezi ezingokoqobo, izimfuneko ezicacile futhi uze ufukamele imibono eminingi ngalo Nkulunkulu ongokoqobo nakakhulu, futhi abakwazi ukwamukela kalula ukuba ngokoqobo nokujwayeleka Kwakhe. Ngaleyo ndlela, ingabe awukholelwa ezintweni ezingacacile eziningi? Unokholo olungeke lunyakaziswe kuNkulunkulu oyinqaba wakudala, futhi awunalo ilukuluku ngoNkulunkulu wangempela wanamuhla. Lokhu akubangelwa yini ukuthi uNkulunkulu wayizolo nalowo wanamuhla baphile ezinkathini ezimbili ezingafani? Ingabe akukhona yini ukuthi uNkulunkulu wayizolo uphakanyisiwe ezulwini, kuyilapho uNkulunkulu wanamuhla eyindoda encane emhlabeni? Ngaphezu kwalokho, ingabe akukhona yini ngenxa yokuthi uNkulunkulu okhonzwa ngabantu yilowo owenziwe ngezindlela zakhe, kuyilapho uNkulunkulu wanamuhla eyinyama ebunjwe lapha emhlabeni? Lapho konke sekushiwo kwaphinde kwenziwa, ingabe akukhona ngenxa yokuthi uNkulunkulu wanamuhla ungokoqobo nakakhulu kangangokuthi umuntu akakwazi ukumfuna? Ngoba lokho uNkulunkulu wanamuhla akufunayo kubantu kuqondile kangangokuthi izikhathi eziningi umuntu akathandi ukukwenza futhi lokho kumenza abe namahloni. Ingabe lokhu akwenzi izinto zibe nzima kumuntu? Ingabe lokhu akumenzi ukuba abe nezibazi? Ngaleyo ndlela, abaningi abangakufuni okuyiqiniso baba yizitha zikaNkulunkulu osesimweni somuntu, babe abaphikukristu. Ingabe lokhu akulona iqiniso elisobala? Ngesikhathi esidlule, lapho uNkulunkulu esezokuba senyameni, kungenzeka nanisenkolweni noma ningamakholwa azinikele. Ngemva kokuba uNkulunkulu esebe yinyama, abaningi ababezinikele bazithola sebengabaphikukristu benganakile. Ingabe uyazi ukuthi kwenzekani lapha? Ekukholelweni kwakho kuNkulunkulu, awuzinaki izinto ezingokoqobo noma awulifuni iqiniso kunalokho uzixaka ngezinto ezingamanga—ingabe lokhu akuwona yini umthombo ocacile wenzondo onayo ngoNkulunkulu osesimweni somuntu? UNkulunkulu osesimweni somuntu kuthiwa uKristu, ngakho akubona bonke abangakholelwa kuNkulunkulu osesimweni somuntu abaphikukristu? Ngakho ingabe yilowo okholelwa futhi omthanda ngempela, uNkulunkulu osenyameni? Ingabe ngempela uyaphila, uNkulunkulu ophefumulayo ongokoqobo nakakhulu futhi nojwayelekile ngendlela emangalisayo? Uyini ngempela, ingabe uyilokho okufunayo? Ingabe isezulwini noma emhlabeni? Ingabe iwumbono noma iyiqiniso? Ingabe iwuNkulunkulu noma isidalwa esinamandla amakhulu angajwayelekile?
Ukubuya kukaJesu kuyinsindiso enkulu kulabo abakwazi ukwamukela iqiniso, kodwa kulabo abangakwazi ukwamukela iqiniso, kuwuphawo lokwahlulelwa. Kumele nikhethe indlela yenu, ningahlambalazi uMoya oNgcwele futhi nenqabe iqiniso. Kumele ningabi abantu abangenalwazi futhi abakhukhumele, kodwa abantu abalalela ukuholwa uMoya oNgcwele, balangazelele futhi bafune iqiniso; ingalendlela kuphela lapho niyothola ukusizakala. Ngiyaniyala ukuthi nithathe indlela yokukholwa kuNkulunkulu ngokunakekela. Ningathathi izinqumo ngokushesha; ngaphezu kwalokho, ningathathi kalula futhi ningani nokungacabangi ekukholweni kwenu kuNkulunkulu. Kumele nikwazi lokhu, okungenani, labo abakholwa kuNkulunkulu kumele bazithobe futhi bahloniphe. Labo abalizwile iqiniso nokho baziqhenya, bayiziwula futhi abanalwazi. Labo abalizwile iqiniso nokho ngokunganaki benza izinqumo ngokushesha noma balichitha bahlushwa ukuzikhukhumeza. Akekho okholwa uJesu ofanele ukuqalekisa noma ahlulele abanye. Kumele nonke nibe nengqondo futhi namukele iqiniso. Mhlawumbe, emva kokuba usuzwile ngendlela yeqiniso futhi wafunda ngezwi lokuphila, ukholwa ukuthi izwi elilodwa kwayizi-10,000 ahambisana nokukholwa kwakho neBhayibheli, ngakho kumele uqhubeke nokufuna kuleli zwi lezi-10,000 kulawa mazwi. Ngisaniluleka ukuba nizithobe, ningazethembi ngokweqile, ningaziphakamisi kakhulu. Ngezinhliziyo zenu eziphethe ukuhlonipha okuncane kakhulu kukaNkulunkulu, niyothola ukukhanya okukhulu. Uma niwahlola ngokuqaphela futhi niwacabange niphindelela la mazwi niyoqonda noma ayilo noma akalona yini iqiniso, noma ayikho noma akasikhona ukuphila. Mhlawumbe, emva kokufunda imisho embalwa, abanye abantu bazokwahlulela la mazwi ngobumpumputhe, bethi, “Lokhu akulutho kunokukhanyiselwa okuthile uMoya oNgcwele,” noma, “Lona uKristu wamanga ozokhohlisa abantu.” Labo abasho izinto ezinje, ababoni ngenxa yokungazi! Niqonda okuncane kakhulu ngomsebenzi nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, futhi ngiyaniyala ukuba niqale futhi ekuqaleni! Akufanele nahlulele ngobumpumputhe amazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngenxa yokuvela koKristu bamanga ezinsukwini zokugcina, futhi ungabi umuntu ohlambalaza uMoya oNgcwele ngoba wesaba inkohliso. Ngeke lokho kube okudabukisayo okukhulu? Uma emuva kokuhlola okukhulu usakholwa ukuthi lawa mazwi akalona iqiniso, akayona indlela, akakhona ukubonakaliswa kukaNkulunkulu, uyojeziswa ekugcineni, futhi ungabi nezibusiso. Uma ungenakho ukwemukela iqiniso elinje elikhulunywe ngokusobala nokucacile kakhulu, ngakho awufanelwe yini insindiso kaNkulunkulu? Awuyena umuntu ongenayo inhlanhla yokubuyela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu?
Nikholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu osezulwini kodwa niphike uNkulunkulu osemhlabeni. Nokho, angiyivumi imibono yenu. Ngincoma kuphela labo bantu abathobekile futhi abakhonza uNkulunkulu osemhlabeni, hhayi labo abangamemukeli uKristu osemhlabeni. Noma ngabe laba bantu bathembeke kanjani kuNkulunkulu osezulwini, ekugcineni, ngeke baphunyuke esandleni Sami esijezisa ababi. Laba bantu bangababi; bangababi abaphikisa uNkulunkulu futhi abangakaze balalele uKristu ngentokozo. Kunjalo, inani labo lifaka nabo bonke abangazi, futhi abangamvumi uKristu. Ingabe ukholwa ukuthi ungenza ngendlela oyithandayo kuKristu uma nje usathembekile kuNkulunkulu osezulwini? Akunjalo! Ukungazi kwakho ngoKristu kuwukungazi ngoNkulunkulu wasezulwini futhi. Noma ngabe uthembeke kangakanani kuNkulunkulu osezulwini, kungamazwi ayize nokuzenzisa, ngokuba uNkulunkulu osemhlabeni akabalulekile kuphela ekutheni umuntu athole iqiniso kanye nolwazi olujulile, kodwa ubalulekile nakakhulu ekujeziseni umuntu emva kwalokho nokubamba amaqiniso okujezisa ababi. Ingabe uyayiqonda imiphumela ezuzisayo nelimazayo lapha? Ingabe usudlulile kukho? Nginifisela ukuthi niliqonde leli qiniso ngolunye usuku oluseduze: Ukuze nazi uNkulunkulu, akumele nazi uNkulunkulu osezulwini kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu, uNkulunkulu osemhlabeni. Ningadideki ngalokho okusemqoka noma nivumele okungaphansi kwedlule okumqoka. Kungale ndlela kuphela lapho ungakwazi khona ukwakha ngeqiniso ubudlelwano obuhle noNkulunkulu, nokusondela kuNkulunkulu, futhi ulethe inhliziyo yakho eduze Kwakhe. Uma ubungowenkolo iminyaka eminingi futhi sesiside isikhathi uhlobene Nami, kepha uhlala uqhelile Kimi, Ngithi kungenxa yokuthi ujwayele ukucasula isimo sikaNkulunkulu, futhi isiphetho sakho kuyoba nzima ukubhekana naso. Uma le minyaka eminingi yokuhlobana Nami ingehlulekanga kuphela ukukuguqulela kumuntu onobuntu neqiniso, kunalokho, yagxilisa izindlela zobubi bakho emvelweni yakho, futhi awunamibono yobukhulu ephindwe kabili kunakuqala kodwa ukungangiqondisisi kwakho knakho kuphindaphindiwe, ngendlela yokuthi uze ungithathe njengomngane wakho omncane, Ngithi-ke ukuhlupheka kwakho akusekuncane nje kodwa sekungene nasemathanjeni akho uqobo. Konke okusele ukuthi ulinde ukuba kwenziwe amalungiselelo omngcwabo wakho! Awudingi ukungincenga ngaleso sikhathi ukuthi Ngibe uNkulunkulu wakho, ngoba wenze isono esifanelwe ukufa, isono esingenakuthethelelwa. Noma ngabe bengingaba nomusa kuwe, uNkulunkulu osezulwini uzophikelela nokuthatha impilo yakho, ngenxa yokuthi icala lakho esimweni sikaNkulunkulu aliyona inkinga ejwayelekile, kodwa olohlobo olunzima kakhulu. Uma sesifika isikhathi, ungangisoli ngokuthi angikutshelanga ngaphambili. Konke kubuyela ekuthini: uma uhlobene noKristu—uNkulunkulu osemhlabeni—njengomuntu ojwayelekile, okungukuthi, uma ukholwa ukuthi lo Nkulunkulu akalutho kodwa ngumuntu nje, yilapho-ke uyobhubha khona. Lesi yisexwayiso esisodwa Sami kini nonke.
Okwedlule: 2. Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?
Okulandelayo: 1. Yini ngempela ukwazi uNkulunkulu? Ingabe ukuqonda ulwazi lweBhayibheli nesayensi yezindaba zenkolo kungathathwa njengokwazi uNkulunkulu?